Khamenei oo si adag uga jawaabay Codkii laga duubay Zarif ee uu ku weeraray Jeneralkii Maraykanku dilay Qassem Soleimani | Qaran News
Khamenei oo si adag uga jawaabay Codkii laga duubay Zarif ee uu ku weeraray Jeneralkii Maraykanku dilay Qassem Soleimani
Writen by Qaran News | 9:59 am 3rd May, 2021
Hoggaamiyaha sare ee Iran Ayatollah Ali Khamenei ayaa cambaareeyey wasiirka arrimaha dibedda dalkas, oo wareysi sir ah oo la dusiyey ku sheegay in Ilaalada Kacaanka Islaamiga ah ay saameyn isaga ka badan ku leeyihiin siyaasadda arraimaha dibedda iyo xogta Nukliyeerka.
Wareysiga oo uu baahiyey taleefishin fadhigiisu yahay London oo ku baxa luuqadda Persian-ka ayaa Mohammad Javad Zarif wuxuu ku sheegay inuusan haba yaraatee wax saameyn ah ku laheyn siyaasadda arrimaha dibedda Iran.
Ayatollah Ali Khamenei, oo jeediyey khudbad laga baahiyey taleefishinka ayaan magacaabin Zarif, hase yeeshee wuxuu hadalldiisa ka yiri “Tani waxa aheyd qalad weyn oo ay tahay inuusan sameyn sarkaal ka tirsan Jamhuuriyadda Islaamiga ah.”
“Ma jirto meel dunida ka mid ah oo wasaaradda arrimaha dibedda ay go’aansato siyaasadda dibedda. Waxaa jira saraakiil ka sarreysa oo go’aanada iyo siyaasadaha qaata. Dabcan, wasaaradda arrimaha dibedda way ku lug leedahay.”
Iran ayaa ka xanibtay inay dalka ka baxaan 15 qof oo lagu tuhmayo inay ku lug leeyihiin codka la dusiyey oo ay mas’uuliyiintu sheegeen in loogu talo-gala diiwaanka dowladda balse aysan aheyn in la baahiyo.
Zarif ayaa wareysiga kaga ashtakooday heerka saameynta uu siyaasadda dibedda ku lahaa hoggaamiyihii la dilay ee ciidamada Qudus ee Kacaanka Islaamiga, Qassem Soleimani.
Cajaladda maqalka ah oo muddo saddex saac socotay ee laga duubay Mohammad Javad Zarif, ayaa Iran ka dhalisay dood kulul ka hor doorashada madaxtinimada iyo xilli ay Iran wadahadallo lagu soo nooleynayo heshiiskii nukliyeerka magaalada Vienna kula leedahay quwadaha dunida.
Qoraal uu soo dhigay Instagram kadib khudbadda Khamenei ayaa Zarif waxa uu kaga cudur daartay hadalladaas oo ka “carreysiiyey” mas’uuliyiinta sare ee Iran.
“Haddii aan ogaan lahaa in erey ka mid ah meel fagaare ah lagu daabacayi, ma aanan sheegeen,” ayuu yiri Zarif.
“Hadalkeyga…ma yareynin maqaamka iyo doorka aan la beddeli karin ee shahiid Soleimani.”